Liibiya oo la isu hub uruursnayo & cabsi laga qabo colaad lagu hoobto (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Liibiya oo la isu hub uruursnayo & cabsi laga qabo colaad lagu hoobto (Sawirro)
24th May 2014 A warsame Af Soomaali 0
Tripoli– Mareeg.com: Waxaa korortay cabsida laga qabo inuu dalka Liibiya markale ka qarxo dagaal lagu hoobto, kadib markii ay diyaar garow dagaal galeen koox uu hogaaminayo Jeneraal howlgab ah oo lagu magacaabo Khaliifa Xaftar iyo koox Islaami ah oo lagu magacaabo Ansaaru-shareeca.
Dalka Liibiya ayaan wax degaanaan ah helin tan iyo sanadkii 2011, xilligaasoo kacdoon dagaal oo dhan ahaa hogaamiyihii hore ee dalkaas Col. Mucamar Al-qadaafi uu bilwoday, kaasoo dhamaadkii keenay in la dilo Qadaafi, dowladiisiina afka dhulka loo daro.
Kooxihii ku kacay Col. Qadaafi ayaa ahaa kuwa kala watay afkaaro kala duwan, qaar ayaa aaminsanaa afkaar Islaami ah, qaar kale ayaa aaminsanaa afkaar dimuquraadi ah, halka ay jiri kareen qolooyin qaba afkaaro kale.
Waxaa dalka Liibiya hareeyey fowdo iyo hubkii oo kooxahaas iyo beelo gacanta u galay, dowladdii dalkuna awood ayay u weysay iney arrimahaas waxa ka qabato, waxaana mar qura saaxada soo istaagay Jeneraal howlgab ah oo ka tirsanaa ciidamadii hore ee Liibiya, Jen. Khaliifa, wuxuuna wacad ku maray inuu dalka ka saarayo kooxaha Islaamiyiinta ah ee Ansaaru-shareeca ugu horreyso iyo maleeshiyaad kale ee hubeysan.
Waxaa dhankooda diyaar garow ballaaran galay jabhadda Ansaaru-shareeca, kuwaasoo ka mid ah ururada sida weyn u hubeysan ee ku sugan dalka Liibiya, waxeyna dhankooda wacad ku mareen iney meel iska saarayaan Jen. Kahliifa.
Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa ka digay dalka Liibiya uu kusii socdo xaalad adag, waxaana USA, Britain, France, Germany iyo Italy soo wada saareen bayaan mideysan, kaasoo ay ku sheegeen in Liibiya taagan tahay meel adag.
Jen. Khaliif ayaa sidoo kale kazoo horjeeda baarlamaanka haatan ka jirta Liibiya, waxaana baarlamaanka u yeertay kacdoon wadayaal hore si ay ciidamada uu wato Jen, Khaliifa uga difaacaan weerar ay ku qaadan baarlamaanka oo horay rasaas loogu kala ceyriyey.
Jen. Khaliifa oo la rumeysan yahay inuu taageero ka heysto dowladda Masar ayaa howlgalka uu ku dhawaaqay wuxuu ugu magac daray “Karaamada Liibiya” waxaana debadbax kusoo dhaweeyey kumaan shacab ah oo ku nool caasimadda Liibiya ee Tripoli.
Dadka qaar ayaa ka shaki qaba in Jen. Khaliifa uu doonayo inuu soo celiyo afkaarihii Col. Qadaafigii la dilay, uuna taageero ka heysto C/fataax Al-siisi oo hogaamiya milateriga Masar, una sharraxan xilka madaxtinimada.
Ciidamada doonaya iney u dagaallamaan Jen. Khaliifa waxaa ku biiray guuto Liibiya looga yaqaano “Saaciqa”, kuwaasoo afka iyo wajiga duubta, islamarkaana heysta tababar gaar ah.
Ciidamadaas ayaa la aasaasay xilligii Col. Qadaafi, waxaana Liibiya looga yaqaanna “Libaaxyada”, waxaana la sheegay in qeybo ka mid ah oo dib isu uruursaday ay joogaan meel 40 KM u jirta magaalada Bangazi ee bariga Liibiya, halkaasoo Jabhadda Ansaaru-shareeca ku xoogantahay.
Dalalka reer galbeedka ayaa ku jiha wareersan dagaalka laga cabsi qabo ee Liibiya, maxaa yeelay Jen. Khaliif ayaa ka horjeeda baarlamaanka dalkaas oo reer galbeedku taageersan yihiin iyo Jabhadda Ansaaru-shareeca oo reer Galbeedku neceb yihiin.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo tegay Koonfur Afrika
DEG-DEG: Isqarxin iyo weerar toos ah oo ka dhacay baarlamanka Soomaaliya